China weghaara ochichi Europe na ume ohuru | Akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ Green
Onye bu ụzọ na ume ọhụrụ, European Union, ka China weghaara ya n'ime afọ gara aga.
O doro anya na mmepe nke ume ọhụrụ na-aga n'ihu n'ụwa niile, ihe akaebe nke a bụ akụkọ niile anyị nwere kwa ụbọchị na RenovablesVerdes.
Ọ bụrụ na anyị lelee anya na blog anyị nwere ike ịhụ na nke ike ndị a, ike anyanwụ na ifufe bụ ndị na-enwe ọganihu pụtara ìhè ma ha nọ ugbu a n'ọnọdụ dị oke mma iji sọọ mpi na mmanụ ọkụ.
Rlọ Ọrụ Na-ahụ Maka Ike Ọhụrụ International (IRENA) nye anyị data dị iche iche anyị nwere ike ịhụ na ụgwọ gị ga na-agbada.
Adnan Amin, Director General nke IRENA kwuru na ngosi nke akụkọ dị ugbu a na Abu Dhabi na:
“Mgbanwe ohuru a na-egosi mgbanwe di egwu na usoro ume, dika imaatu, ugwo nke ike fotovoltaic site na ihe dika 50 percent na onu ogugu uwa n’aho ato n’iru.
“Mkpebi maka ume ọhụrụ maka mmepụta nke ọkụ eletrik abụghị naanị maka obibi, mana karịa, mkpebi akụ na ụba nwere ọgụgụ isi. Gọọmentị gburugburu ụwa na-ahụ ikike a ma na-akwalite sistemụ ume ike dị na carbon dioxide ”
1 China weghaara ochichi Europe na ume ohuru
2 Europe ọ ga-enwetaghachi ala?
3 Ọchịchị nke China
China na-eto eto nke ukwuu na teknụzụ nke ọdịnihu ma na-emepewanye ike anyanwụ na ifufe karịa mba ọ bụla ọzọ na mbara ala.
Onye na-ahụ maka akụnụba Prọfesọ Claudia Kemfert, ọkachamara na ike, site na German Institute for Economic Research kwuru:
"China na-ewere onye ndu a n'ihi na ọ na-amata nnukwu ahịa na uru akụ na ụba ya."
Dabere na data sitere na Bloomberg New Energy Finance, China kwadoro ego ruru ijeri dollar 133 na ume ọhụrụ n'ime afọ gara aga. Ihe karịrị ọkara nke mmefu ego a gara ike anyanwụ.
Dị ka NEA si kwuo, China National Energy Administration, etinye foto osisi nke nwere ihe dị ka 2017 GW na 53 naanị, ntakịrị ihe karịrị ọkara nke ike ụwa.
Germany, onye ọsụ ụzọ ruo oge gara aga banyere ike anyanwụ, maka otu afọ ahụ na-emetụ 2 GW nke ikike.
Ma ọ bụ na, site na amụma uto ya, China edochila Europe kpamkpam dị ka onye ndu na ume ọhụrụ na, dị ka Bloomberg New Energy Finance, na 2011 na 2017, etinye ego ndị ahụ belatara ọkara, kpọmkwem ruo 57 nde dollar.
Hans-Josef Fell, President nke Energy Watch Group kwuru, sị:
“Ruo 2011, EU nwere ọrụ nduzi doro anya. N'ihi ọdịda nke ọchịchị ya, o nyefere ya.
"E mere iwu iji kpuchido akụ na ụba nke ike atomiki, coal, mmanụ na gas gas, megide ume ọhụrụ."
Europe ọ ga-enwetaghachi ala?
Onye isi oche nke European Commission. Jean-Claude Juncker kwuru, sị:
"Achọrọ m ka Europe bụrụ onye ndu na ọgụ megide mgbanwe ihu igwe."
Mba ndị otu, European Commission na European Parliament na-amụ ma na-arụrịta ụka banyere omume ndị dị mkpa na nke dị mkpa n'ime usoro nke nnukwu ngwugwu nke iwu n'okpuru aha: "Ike dị ọcha maka ndị Europe niile".
Nkwupụta nke European Commission hụrụ na òkè nke ume ohuru na-ebili na 27% site na 2030, n'ihe metụtara ike oriri zuru oke (ugbu a ọ bụ 17%).
Isi nsogbu dị na Europe bụ nke Stefan Gsänger dere, Secretary General nke WWEA (World Wind Energy Association), ahịa na-ada ma ọ bụ laa azụ.
“Ugbu a na Europe anyị nwere ego kachasị dị ala karịa afọ iri. N'okpuru ọnọdụ ndị a, o doro anya na ndị ọchụnta ego enweghị ike itinye ego na ọtụtụ ma ọ bụ na teknụzụ ọhụụ. N'ihi ya, ihe ọhụrụ na-eme n'akụkụ ndị ọzọ.
Ọ bụrụ na Yurop chọrọ ịkatọ onye isi, mgbe ahụ EU kwesịrị ịchọrọ ma ọ dịkarịa ala ihe mgbaru ọsọ nke 50 pasent nke ume ọhụrụ maka njikọ ike zuru oke site na 2030 ”.
Ọchịchị nke China
Obi abụọ adịghị ya, na China mgbasawanye nke ume ọhụrụ na-adị mfe karịa maka Europe n'ihi na mba mbụ oriri ike na-amụba ruo mgbe ebighị ebi.
julian schorp, si na German Chamber of Industry and Commerce na Brussels na-akọwa:
"N'ebe ahụ ka ha na-etinye ego n'ime ikike ọhụrụ, na-enweghị mkpa iwepu mmanu ma ọ bụ ikike nuklia site na mgbasa," ka ọ na-akọwa.
Na Europe, na ntụle, enwere oke ikike na oriri ike, dịka ụkpụrụ EU si dị, ga-agbadata.
Ya mere, ume ọhụrụ nwere ike iwepụ osisi ike ndị ọzọ n'ahịa ”.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ Green » Ike imeghari ohuru » China weghaara ochichi Europe na ume ohuru
Galicia chọrọ iduzi mmepụta nke ume ọhụrụ na Spain